Somaliland.Org » Wararka Wargeyska OGAAL, cadadkii Maanta, Khamiis, 31 Jan.
Wararka Wargeyska OGAAL, cadadkii Maanta, Khamiis, 31 Jan.
January 31st, 2008 Comments Off “Somaliland faro-guudkood ayuun bay ka heshaa dhaqaalaha Afrikaanku kaga qaadaan Maraykanka dagaalka argagixisada”By Matt Mainen Washington (Wahington Post/The Retriever Weekly/Ogaal) – Xukuumadda Maraykanka ayaa danaynaysa aqoonsi diblomaasiyadeed oo ay siiso Somaliland, sidaana waxa lagu sheegay maqaal uu baahiyay Wargeyska The Washington Post, oo ay ka xigteen shabakaddaha wararka caalamka qaarkood.
Maqaalkaas oo uu qoray Mr Matt Mainen, oo ka tirsan Wargeyska The Retriever Weekly, oo ka soo baxa dalka Maraykanka, kaas oo Wargeyska Post ka soo xigtay dood ay baarlamaanka Maraykanku ka yeesheen arrimaha xilligan ee Soomaaliya, waxa uu weriyuhu ku sheegay in qaddiyadda Somaliland ay tusaale fiican u tahay dhulalka ay dawladduhu ka jiraan ee xuduudaha leh, balse maamuladoodu ay yihiin dawlad-gobollo. Maqaalkaas oo aad u dheeraa, isla markaana uu suxufigu kaga warramay inta badan dalka Soomaaliya, oo uu sheegay inay u kala jajabtay qaybo kala duwan, waxa qaybta uu kaga hadlayo Somaliland oo aanu si gaar ah uga soo xullay maqaalkiisa ku yidhi: “Maqaal lagu daabacay Wargeyska The Washington Post (“Dooddii Maraykanku waxay isu bedeshay inay taageeraan khilaafaadka”) kaas oo lagu sheegay in Maraykanku uu tixgelinayo inuu aqoonsi diblomaasiyadeed siiyo maamul-goboleedka Somaliland ee ku yaala waqooyi/galbeed ee Soomaaliya. Inkasta oo xidhiidhka diblomaasiyadeed ee lala yeesho qaramada gaarkooda u goáy ay sababto muran qalafsan, haddana waxa jira xaaladdo khaas ah, oo waafaqsan heerka caalamiga ah ee lagu ixtiraamo maamul leh madaxbanaani buuxda iyo xuduud-dhuleed dhamaystiran oo la xidhiidha dhulka ku jira xuduudahooda rasmiga ah, kaas oo mudan in la aqbalo. Qaddiyadda Somaliland waa tusaale xooggan.
Somaliland ma aqoonsana dawladda ku-meel-gaadhka Soomaaliya, isla markaana waxay isu arkayaan inay haystaan madaxbanaani buuxda. Inkasta oo ay kooban tahay caawimada dibadeed ee ay helaan, maadaama ay dalalka iskood isu taagaa ay ka helaan wax aad u yar dawladdaha aanay la wadaagin wax xidhiidh diblomaasiyadeed, ayaa haddana Somaliland waxay u tallaabsatay si cajiib leh. Bishii February 27 (2007), Nicholas Kristof, oo ah aqoonyahan aad loo yaqaano, ayaa maqaal uu cinwaan uga dhigay “Dhulka Caanaha Geela iyo Malabka,” oo uu ku qoray Wargeyska New York Times, waxa uu ku sharraxay Somaliland sida qaran dimuquraadiyadeed oo degenaansho haysta, oo ay ka taliso dawlad si fiican oo xor ah u shaqaynaysa oo lagu soo doortay doorashooyin xor ah, isla markaana ay si wanaagsan uga jiraan adeegyadii arrimaha bulshada oo ay ku jiraan dugsiyadii, cusbataaladii iyo xataa laybareeriyadii. Marka la barbar dhigo magaalada Muqdisho, halkaas oo uu qofku dareemi karo qaawanaan inuu soconayo, haddii aanu jidhkiisa oo dhan hubaynin, oo aanu haysanin qoryaha darandooriga u dhaca, waxay caasimadda Somaliland ee Hargeysa hoy u tahay “Barwaaqada dahabka iyo suuqa dhaqaalaha [halkaasoo] kooxo dad ah, oo badankoodu yihiin haween, ay malaayiin doollar dahab u dhigma qiime ahaan iyo dhagxaanta qaaliga ah iyo sarifka lacagaha qalaad, waxa ay kaga ganacsadaan oo la fadhiyaan banaanada.”
“Wasaaradda Gaashaandhiga Maraykanka ayaa doonaysa inay cadaadis ku saaraan xukuumadooda sidii xidhiidh diblomaasiyadeed loola yeelan lahaa Somaliland, taasoo u arkaysa inay taasi tahay tallaabo sax ah oo dhinacaa (Somaliland) loo qaadayo, marka loo eego dagaalka lagala soo horjeedo Al-Qaacidda iyo muslimiinta mayalka adag. Iyada oo dalal badan oo Afrikaan ahi ay dhaqaale badan kaga helaan Maraykanka dagaalka argagixisada, kuwaas oo aan guul ka gaadhin, ayaa Somaliland waxay arrintaa ku heshaa wax faro-guudkood ah oo dhaqaalahaas ka mid ah, balse taas natiijadeedu waa inay noqotaa abaal-marin ay ku helaan dedaalkooda oo ay yeelataa hanaanka sidii dal madaxbanaan. Maadaama la doonayo in guul laga gaadho dagaalka argagixisadda lagula jiro, ayaa dagaalkani waxa uu noqonayaa mid fikir ahaaneed, balse maaha dagaal u dhexeeya dimuquraadiyadda iyo islaamka, isla markaana ma jiraan cid maaro u heli karta kooxaha islaamiyiinta ah, oo aan ka ahayn in laga sameeyo xukuumado furfuran oo xor ah, oo ka dhasha dhulalka ay iyagu (Kooxaha Islaamka) jecel yihiin inay gacanta ku hayaan. Sidaas daraadeed, ma kala cadda mustaqbalka Soomaaliya, marka la barbar dhigo Somaliland, waana sida ay u leeyihiin (Maraykanka), “Shimbirta gacantaada ku jirtaa, waxay ka wanaagsan tahay laba shimbirood oo duurka ku jira.”
Hargeysa (Ogaal) – Sarkaal u dhashay dalka Armenia oo madax ka ah Mashruuca Hay’adda Ingiriiska ah ee Miina-saarka, HALLO TRUST ka fuliso Somaliland ayaa toogasho lagu dhaawacay shalay, magaalada Hargeysa. Waxaana dhaawiciisa Islagelinkii danbe ee shalay loo qaaday Jabuuti.
Sida wararku sheegayaan, ninka ku eedaysan falkan toogashada ah oo magaciisa la yidhaahdo Cabdi Maxamed Yuusuf (Cabdi Madoobe), kana mid ahaa hoggaamiyayaasha ama madaxda kooxaha miina-saarka muwaaddiniinta ah ee hay’addaas ka shaqeeya, balse, shaqada laga eryey laba maalmood ka hor ayaa gelinkii hore ee shalay xafiiska ugu tegey ninka Armenian-ka ah ee madaxda ka ah Barnaamujka hay’adda HALLO TRUST ee Somaliland. Waxana la sheegay inuu ku ridey xabad baastooladeed, taas oo kaga dhacday Caloosha. Hase yeeshee, waxa isagana xabad lugta kaga dhaawacay ilaalada Booliska ah ee xafiiska hay’adda, isla markaana gacanta ku dhigay ninka falka geystey. Waxaana labada ninba dhaawacooda la geeyey Cusbitaalka Guud ee Hargeysa, halkaas oo qalliino fudud iyo daaweyn loogu sameeyey.
Wasiirka Wasaarada Arrimaha Gudaha Somaliland Md. Cabdilaahi Ismaaciil Cali (Cabdilaahi Ciro), oo falkan ka hadlay ayaa isaguna sheegay in Ciidamada nabad-gelyadu ay baadhayaan arrintan, isla markaana ay gacanta ku hayaan Baastooladii falkaa lagu galay iyo ninka ku eedaysanba.
Wasiirka Arrimaha Guduhu waxa uu sheegay in eedaysanaha falkan loo qabtay (Cabdi Madoobe) uu Hay’ada Hollo Trust u shaqaynayay muddo gaadhaysa Sideed Sannadood, islamarkaana uu ka mid ahaa shaqaale dhawaan hayadu dhintay oo xaqiisii la siiyay.
Taliyaha Boliska Somaliland Maxamed Saqadhi Dubad oo isagana wax laga weydiiyay falkan ayaa ku raacay Wasiirka arrintaasi isaga oo sheegay taliyuhu in muddadii heshiiku ka dhamaatay eedaysanaha, Isla maantana la siiyay xuquuqdiisii. Hase-ahaatee, Mr. Cabdi Madboobe oo Warbraahintu dhiniciisa wax ka waydiisay sababta ku kaliftay in uu toogto sarkaalka Ajanabiga ah, ayaa waxa uu ku dooday in uu duudsiyey xaquuqdiisii mu’waadinimo.
Eedaysanahan ayaa markii danbe loo gudbiyay xarunta baadhista denbiyada oo dhacdadan gacanta ku haysa.
Gudoomiyaha Komishanka Xuquuqda aadamaha Qaranka Axmed Yuusuf Xuseen ayaa falkan lagu dhaawacay sarkaalka u shaqaynayay Hayada miinada dhaleeceeyay. Waxana uu tilmaamay inaanay haboonayn in qofka wax tirsanayaa sharciga gacantiisa ku fushado.
Baarlamaanka Maraykanka oo la horgeynayo mooshin lagu taageerayo aqoonsiga Somaliland
“Waan taageerayaa mooshinkaa sharci, haddii aan qoraal taageero ah ugu gudbinayo Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo haddii baarlamaanka la horgeynayoba……”
Howard Coble: Mudd. Baarlamaanka USA ka tirsan
Washington DC (SSI/Ogaal)- Mooshin qoraal ah, oo ka hadlayay in ay tahay in Dawladda Maraykanku aqoonsato Madax-bannaanida Somaliland, ayaa la diyaar